» यस्ता छन् ‘मिस तामाङ पोखरा २०२०’ का प्रतियोगीहरु
यस्ता छन् ‘मिस तामाङ पोखरा २०२०’ का प्रतियोगीहरु
३ माघ २०७६, शुक्रबार १४:०१
मकवानपुर, ०३ माघ । मिस तामाङ पोखराको पाँचौँ संस्करणको फाईनल यही माघ ४ गते हुँदैछ । सोनाम ल्होछारको अवसरमा बैदाम तामाङ सेवा समाजको आयोजनामा हरेक वर्ष गरिदै आएको मिस तामाङ पोखरा २०२० मा यस वर्ष १७ जना तामाङ सुन्दरीहरुले सहभागिता जनाएका छन् । ४५ दिनसम्म विभिन्न विधाको प्रशिक्षणमा सहभागी भएका प्रतियोगीहरु फाईनल भिडन्तको लागि तयार भएका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा मिस तामाङ पोखरा २०२० मा सहभागी १७ प्रतियोगीहरुका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ । हेरौँ यो भिडियो–
१) आकृति भ्लोन तामाङ– आकृति भ्लोन तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर एक हुन् । मकवानपुर घर भई हाल पोखरामा बसोबास गरिरहेकी आकृतिले तामाङ भाषा र सँस्कृतिको जगेर्नामा योगदान दिने लक्ष्य राखेकी छिन् ।
२) सृजना घिसिङ तामाङ– सृजना घिसिङ तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर दुई हुन् । पोखराको लेखनाथ निवासी सृजना यात्रा गर्न र नृत्य गर्न रुचाउँछिन् । उनी एक सफल डान्सर बन्न चाहान्छिन् ।
३) किस्मत स्याङ्बो तामाङ– किस्मत स्याङ्बो तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ३ हुन् । पोखराको नयाँ गाउँ निवासी किस्मत तनहुँमा जन्मिएकी किस्मत कुकिङमा रुचि राख्छिन् । उनी एक कुशल सेफको रुपमा आफ्नो करियर अघि बढाउन चाहान्छिन् र आफ्नै लगानीमा रेष्टुरेन्ट समेत संचालन गर्न चाहान्छिन् ।
४) कोमल तामाङ– कोमल तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ४ हुन् । मकवानपुर निवासी कोमल अहिले पोखराको बुद्ध चोकमा बस्छिन् । नयाँ ठाउँमा यात्रा गर्न र नृत्य गर्न रुचाउने कोमल एक सफल बैँकर बन्न चाहान्छिन् ।
५) सशिकला बोम्जन तामाङ– सशिकला बोम्जन तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ५ हुन् । पोखराको लेकसाईड निवासी सशिकला एक सफल पाईलट बन्न चाहान्छिन् । उनी यात्रा गर्न रुचाउँछिन् ।
६) सुजाता गोले तामाङ– सुजाता गोले तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ६ हुन् । ओखलढुङ्गा निवासी सुजाता हाल पोखराको रानीपौवामा बस्छिन् । यात्रा गर्न रुचाउने सुजाता एक कुशल समाजसेवी बनेर समाजको विकासमा लाग्न चाहान्छिन् ।
७) भूमिका थिङ तामाङ– भूमिका थिङ तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ७ हुन् । एक नेतृ बन्ने उदेश्य बोकेकी भूमिका बिरौटामा बस्छिन् ।
८) सलिना वाईबा तामाङ– सलिना वाईबा तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ८ हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उनी नृत्य गर्न र चित्र बनाउन रुचि राख्छिन् । उनी एक उत्कृष्ठ फेसन डिजाईनर बन्न चाहान्छिन् ।
९) बिन्दु वाईबा तामाङ– बिन्दु वाईबा तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ९ हुन् । पोखरा निवासी बिन्दु गीत गाउन र नृत्य गर्न रुचाउँछिन् । उनी एक असल एयरहोस्टेज बन्न चाहान्छिन् ।
१०) सृजना ब्लोन तामाङ– सृजना ब्लोन तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १० हुन् । ओखलढुङ्वा निवासी सृजना हाल पोखरामा बसोबास गर्छिन् । नयाँ स्थानहरुमा यात्रा गर्न रुचाउने सृजना एक असल समाजसेवी बन्न चाहान्छिन् ।
११) मनिषा गोम्जा तामाङ–मनिसा गोम्जा तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर ११ हुन् । सिमपानी निवासी मनिषा नृत्य गर्न र यात्रा गर्न रुचाउँछिन् । उनी एक सफल डान्सर बन्न चाहान्छिन् ।
१२) सुमिक्षा दोम्जन तामाङ– सुमिक्षा दोम्जन तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १२ हुन् । पोखराको लामाचोक निवासी सुमिक्षा नर्सको रुपमा कार्यरत छिन् । नृत्य गर्न रुचाउने सुमिक्षा उनी असल समाजसेवी बन्न चाहान्छिन् ।
१३) प्रिती वाईबा तामाङ– प्रिती वाईबा तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १३ हुन् । पोखरामै हुर्किएकी प्रिती नाच्न र समाजसेवा गर्न रुचाउँछिन् । एक सफल महिला उद्यमी बन्ने लक्ष्य राखेकी प्रिती अहिले बिजनेश स्टडीमा ब्याचलर गर्दैछिन् ।
१४) अनिशा स्याङ्बो तामाङ– अनिशा स्याङ्बो तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १४ हुन् । पोखरामा बसोबास गर्दै आएकी अनिशा कलाकार बन्न चाहान्छिन् ।
१५) सरस्वती थोकर तामाङ– सरस्वती तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १५ हुन् । शोलुखुम्बु निवासी सरस्वती हाल पोखरामा बस्छिन् । गीत गाउन, नाच्न र यात्रा गर्न रुचाउने सरस्वती एक सफल मोडल बन्न चाहान्छिन् ।
१६) रेणु स्याङ्तान तामाङ– रेणु स्याङ्तान तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १६ हुन् । काभ्रे जिल्लाको तेमाल निवासी रेणु हाल पोखरामा बसोबास गर्छिन् । उनी नाच्न र यात्रा गर्न रुचाउँछिन् । उनी एक सफल उद्यमी बन्न चाहान्छिन् ।
१७) स्वस्तिका लोप्चन तामाङ– स्वस्तिका लोप्चन तामाङ ‘मिस तामाङ पोखरा २०२० को प्रतियोगी नम्बर १७ हुन् । नुवाकोट निवासी स्वस्तिका हाल पोखरामा बस्छिन् । उनी नाच्न र यात्रा गर्न रुचाउँछिन् । उनी एक सफल नर्स बन्न चाहान्छिन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा मिस तामाङ पोखराको विजेता को बन्नेछिन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।